HomeWararka CiyaarahaXavi oo Diiday inuu meesha ka saaro in Frenkie de Jong uu ka Tagayo kooxda Manchester United
Maamulaha Barcelona Xavi ayaa diiday inuu meesha ka saaro suurtogalnimada uu kooxda Manchester United uga tagi karo xiddiga khadka dhexe ee Frenkie de Jong .
In kasta oo ay soo baxeen xiddigaha da’da yar ee Pedri iyo Gavi , De Jong waxa uu weli qayb muhiim ah ka yahay qolka matoorka Barcelona tan iyo markii Xavi uu majaraha u qabtay Ronald Koeman .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Holland ayaa xirtay funaanadda Catalan 46 jeer tartamada oo dhan xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo dhaliyay afar gool, halka uu dhigay shan kale.
De Jong ayaa sidoo kale ku soo bilowday 29 jeer horyaalka La Liga, inkasta oo uu ka maqnaa kulankii ay bar-baraha la gashay kooxda Getafe todobaadkii hore sababo la xidhiidha ganaax.
25-sano jirkaan ayaa qandaraas kula jira Camp Nou ilaa xagaaga 2026, laakiin mustaqbalkiisa ayaa su’aal la geliyay iyadoo la soo jeedinayo inuu isha ku hayo Man United.
Erik ten Hag – oo kormeeray horumarka De Jong ee Ajax kana caawiyay inuu gaaro semi-finalka Champions League – ayaa diyaar u ah inuu bilaabo shaqadiisa Old Trafford maalmaha soo socda.
Mar wax laga weydiiyay rajada uu De Jong ugu biirayo Man United, Xavi ayaa si adag uga hadlay wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, lakiin waxa uu qirtay in “xaalad dhaqaale” ee kooxda ay soo gali karto ciyaarta.
“Aniga ahaan, Frenkie waa ciyaaryahan weyn, waa bahal, waan jeclahay isaga, waxaana u maleynayaa inuu qeyb ka noqon karo xilli muhim ah oo kooxda ah, waan arki doonaa xaalada dhaqaale ee kooxda… laakiin waxaan jeclahay De Jong. “Xavi ayaa u sheegay saxafiyiinta mar uu shir jaraa’id qabtay.
Waxaa la soo jeediyay in De Jong la iibiyo si dhaqaale loogu helo Robert Lewandowski , kaasoo aan qandaraaska u kordhin doonin Bayern Munich wixii ka dambeeya xagaaga 2023.
Madaxweynaha Barca Joan Laporta ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay mowduuca mustaqbalka ciyaaryahanka khadka dhexe, waxaana madaxa Catalan uu si fudud ugu jawaabay inuu sameyn doono “waxa kooxda u wanaagsan”.
“Waxaan u sameyn doonaa waxa ugu fiican kooxda. Haddii dhaqaalaha ee aan dooneyno inaan kicino, ma jiro ciyaaryahan ka tagi doona sababo dhaqaale,” Laporta ayaa u sheegay Catalunya Radio .
“Waxaan ku adkeysanayaa, ha shaqeeyaan maamulka isboortiga, waxaa jira ciyaartoy la sheegay inay heleen dalabyo, aagga isboortiga, Xavi iyo Mateu Alemany ayaa go’aaminaya maamulka isboortiga ee kooxda, waan raaci doonaa waxa ay sameeyaan xirfadlayaasha kooxda. dheh.”
De Jong ayaa 13 gool iyo 17 caawin ka sameeyay 139 kulan oo uu u saftay Barcelona ilaa haatan, laakiin waxa uu kaliya haystaa hal Copa Del Rey si uu u muujiyo saddexdii sano ee uu kooxda joogay.
Xaalada qandaraaska xiddiga reer Holland ayaa la macno ah in Barcelona ay awood u yeelan karto in ay ku kaxeyso gorgortan adag, Man United ayaana lagu soo waramayaa in ayna diyaar u ahayn in ay bangiga u jabiso si ay ula soo saxiixato difaacii hore ee Ten Hag.
Barcelona ayaa maalinti ugu danbeysa kulankeeda ugu danbeysa ee La Liga la ciyaari doonta kooxda Villarreal oo la hubo in ay ku dhamaysan doonto kaalinta 2-aad halka Man United ay doonayso in ay kaalinta 6-aad ee kala saraynta horyaalka Premier league ka soo gaadho Crystal Palace iyada oo uu Ten Hag tarabuunka ku daawanayo.